ဖျက်မြင်းအဆင့်ထက်ပိုကြောင်း သက်သေပြရမယ့် နင်ဂျာများ (NIP – TI9 Team Profile) – Gaming Noodle
ဖျက်မြင်းအဆင့်ထက်ပိုကြောင်း သက်သေပြရမယ့် နင်ဂျာများ (NIP – TI9 Team Profile)
NiP လို့ အတိုကောက် ခေါ်နေကြတဲ့ Ninjas in Pyjamas ဟာ တကယ်တော့ Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) ရဲ့ professional ကစားသမားများနဲ့ အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဝါရင့် ဆွီဒင် Esports အသင်းပါ။ ၂၀၁၅ က စလို့ LAJONS ဆိုတဲ့ ဆွီဒင် DotA2 အသင်းကို NiP အသင်းအဖြစ် ခေါ်ယူပြီး DotA2 လောကထဲကို မြေစမ်းခရမ်းပျိုး စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၅ တစ်နှစ်လုံး ရလဒ်ကောင်း ဘာမှမရရှိခဲ့လို့ အသင်းကို ပြန်ဖြုတ်ပြီး ၂၀၁၆ မှာ ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ အရောက်မှာ အသင်းသစ်တစ်သင်းကို ထပ်မံခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် “မျှော်လင့်ချက်တွေ ပိုကြီးနေပြီး ရလဒ်တွေက ဆိုးတယ်” ဟုဆိုကာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပြန်ဖြုတ်ချပြန်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလရောက်မှ DotA2 ကစားသမားများဖြစ်ကြတဲ့ PPD, Ace, Fata, Saksa နဲ့ 33 တို့ကို ခေါ်ယူပြီး NiP Dota2အသင်းအဖြစ် roster သစ် ကြေငြာခဲ့တာပါ။
NIP Current Roster
လက်ရှိ TI9 ကို တက်လာတဲ့ NiP အကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် အသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ရလဒ်တွေထက် လက်ရှိအသင်းသားအသစ်များရဲ့ အကြောင်းအရာကသာ ပိုမိုပေါ်လွင်စေမှာပါ။ အသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဝါရင့် support ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ PPD ဟာ Evil Geniuses (EG) အသင်းမှာ ကစားခဲ့စဉ်က အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် TI5 ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူပါ။ EG မှာ ၂ နှစ်ခွဲခန့် ကစားခဲ့သလို လူသိများခဲ့တဲ့ OpTic Gaming မှာလည်း ၁ နှစ်လောက် ကစားခဲ့ပါသေးတယ်။
PPD ရဲ့ အခြား TI အတွေ့အကြုံများအနေနဲ့ TI4 နဲ့ TI6 တို့မှာ တတိယနေရာ ၂ ကြိမ်တိတိ ရရှိထားသလို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် TI8 မှာလည်း ၇ နဲ့ ၈ ပူးတွဲနေရာကို OpTic Gaming မှာ ကစားရင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ The Summit 4, Dota Pit League Season 3, Dota2Asia Championships 2015, DreamLeague Season 2, StarLadder StarSeries Season 10, World E-sport Championships 2014, HyperX D2L Western Challenge, The Summit စတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း EG အတွက် ပထမဆုများ ယူပေးနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ppd in TI5 Champion EG Team
အသင်းရဲ့ carry ကစားသမား Ace ကတော့ Team Secret ကနေ ပြောင်းလာခဲ့သူပါ။ Ace ဟာ ဟိုးအရင်ခေတ်များက ရေပန်းစားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Mousesports, MYM, Cloud9 စတဲ့ အသင်းများမှာ လည်ပတ်ကစားနေခဲ့ဖူးပါတယ်။ TI ကံမကောင်းလေ့မရှိခဲ့သူ Ace ဟာ Fata နဲ့ အတူ Team Secret မှာ ကစားခဲ့တဲ့ TI8 မှာတော့ ၅ နဲ့ ၆ ပူးတွဲ နေရာထိ တက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ DreamLeague Season 8 နဲ့ DreamLeague Season9တို့လို ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာလည်း ပထမနေရာ ရအောင် Team Secret အတွင်းကနေပဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။
Ace နဲ့ အတူ Team Secret ကနေ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ Fata ဟာလည်း သက်တမ်းရင့် mid lane ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Team Liquid နဲ့ အခြားသော အသင်းများမှာ လှည့်လည်ကစားခဲ့ပါတယ်။ Fata ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Team Liquid ဟာ TI6 မှာ ၇ နဲ့ ၈ ပူးတွဲနေရာ ရရှိခဲ့ပြီး Epicenter 2016 မှာ ပထမ နေရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ The Shanghai Major 2016 နဲ့ The Manila Major 2016 တို့မှာလည်း ဒုတိယနေရာများရခဲ့ပါသေးတယ်။
TI grand final အထိ ရောက်ဖူးသူ နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Saksa လည်း ပါဝင်ပြီး TI6 မှာ ဒုတိယနေရာကို Digital Chaos (DC) အသင်းဝင်အနေနဲ့ ရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ ESL One Genting 2017 မှာလည်း DC ထဲကနေပဲ ပထမ ရခဲ့ပါတယ်။ Coach အတွေ့အကြုံလည်းရှိတဲ့ Saksa ဟာ 33 ပါဝင်တဲ့ Hellraisers အသင်းကို TI7 ရဲ့ ၁၈ သင်းထဲဝင်တဲ့အထိ နည်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံး offlane ကစားသမား 33 ကတော့ OpTic Gaming ကနေ ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီး TI8 ရဲ့ ၇ နဲ့ ၈ ပူးတွဲနေရာကို PPD နဲ့ အတူရရှိခဲ့သူပါ။ ESL One Birmingham 2018 မှာလည်း ဒုတိယရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသင်းသားများ အားလုံးဟာ များစွာသော ပြိုင်ပွဲများမှာ ဆုကြီးများ မရသည့်တိုင်အောင် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင် ရုန်းကန်နေခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြား သမိုင်းကြောင်းများလည်းမရှိပဲ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး PPD ဦးဆောင်တဲ့ NiP ဟာ ၂၀၁၈ မှာ GG.Bet Invitational Season 1 မှာ ပထမရရှိခဲ့သလို၂၀၁၉ အတွင်း စွမ်းဆောင်ချက်များအနေနဲ့ WePlay! Dota2 Tug of War: Radiant, OGA Dota PIT Minor 2019 နဲ့ StarLadder ImbaTV Dota2Minor Season2တို့မှာလည်း ပထမဆုများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Dota pro circuit အရ season အပြီးမှာ NiP ဟာ TI9 ကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ NiP အသင်းဟာ TI ကို တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိတာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပေမယ့် အသင်းသားများကတော့ TI အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိကြပါတယ်။
အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ နဲ့ ဆက်စပ်မှုများကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ TI အတွေ့အကြုံရှိသူ အများအပြား ပါဝင်တဲ့ NiP ကို TI5 တုန်းက EG လို PPD က ဦးဆောင်ပြီး grand final များဆီ ခေါ်ဆောင် အနိုင်ယူသွားနိုင်သလို ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ပြင်းထန်လှတဲ့ TI ပွဲကြီးထဲမှာ teamwork အနည်းငယ် နုနယ်သေးတဲ့ ဒီအသင်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုရှင်သန်ကျန်ရစ်မယ် ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရလာဒ် မထွက်ခင်ထိ ဘာမဆို ဖြစ်သွားနိုင်တာဟာလည်း Dota ပဲ ဖြစ်တာမို့ TI9 ဝင် NiP အသင်းဟာလည်း စောင့်ကြည့်ခံအသင်းတစ်သင်း ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ Dota2သတင်းနှင့် အခြား esport သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်လျက် ရှိပါတယ်။
ဖကျြမွငျးအဆငျ့ထကျပိုကွောငျး သကျသပွေရမယျ့ နငျဂြာမြား (NIP – TI9 Team Profile)
NiP လို့ အတိုကောကျ ချေါနကွေတဲ့ Ninjas in Pyjamas ဟာ တကယျတော့ Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) ရဲ့ professional ကစားသမားမြားနဲ့ အဓိကဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဝါရငျ့ ဆှီဒငျ Esports အသငျးပါ။ ၂၀၁၅ က စလို့ LAJONS ဆိုတဲ့ ဆှီဒငျ DotA2 အသငျးကို NiP အသငျးအဖွဈ ချေါယူပွီး DotA2 လောကထဲကို မွစေမျးခရမျးပြိုး စတငျဝငျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ၂၀၁၅ တဈနှဈလုံး ရလဒျကောငျး ဘာမှမရရှိခဲ့လို့ အသငျးကို ပွနျဖွုတျပွီး ၂၀၁၆ မှာ ငွိမျနခေဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၇ အရောကျမှာ အသငျးသဈတဈသငျးကို ထပျမံချေါယူခဲ့ပမေယျ့ “မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပိုကွီးနပွေီး ရလဒျတှကေ ဆိုးတယျ” ဟုဆိုကာ သိပျမကွာခငျမှာပဲ ပွနျဖွုတျခပြွနျပါတယျ။ ၂၀၁၈ စကျတငျဘာလရောကျမှ DotA2 ကစားသမားမြားဖွဈကွတဲ့ PPD, Ace, Fata, Saksa နဲ့ 33 တို့ကို ချေါယူပွီး NiP Dota2အသငျးအဖွဈ roster သဈ ကွငွောခဲ့တာပါ။
လကျရှိ TI9 ကို တကျလာတဲ့ NiP အကွောငျးကွညျ့မယျဆိုရငျ အသငျးရဲ့သမိုငျးကွောငျးနဲ့ ရလဒျတှထေကျ လကျရှိအသငျးသားအသဈမြားရဲ့ အကွောငျးအရာကသာ ပိုမိုပျေါလှငျစမှောပါ။ အသငျးရဲ့ ခေါငျးဆောငျ ဝါရငျ့ support ကစားသမားတဈဦးဖွဈသူ PPD ဟာ Evil Geniuses (EG) အသငျးမှာ ကစားခဲ့စဉျက အသငျးရဲ့ခေါငျးဆောငျအဖွဈ TI5 ခနျြပီယံဖွဈခဲ့သူပါ။ EG မှာ ၂ နှဈခှဲခနျ့ ကစားခဲ့သလို လူသိမြားခဲ့တဲ့ OpTic Gaming မှာလညျး ၁ နှဈလောကျ ကစားခဲ့ပါသေးတယျ။
PPD ရဲ့ အခွား TI အတှအေ့ကွုံမြားအနနေဲ့ TI4 နဲ့ TI6 တို့မှာ တတိယနရော ၂ ကွိမျတိတိ ရရှိထားသလို ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ TI8 မှာလညျး ၇ နဲ့ ၈ ပူးတှဲနရောကို OpTic Gaming မှာ ကစားရငျးရရှိခဲ့ပါတယျ။ The Summit 4, Dota Pit League Season 3, Dota2Asia Championships 2015, DreamLeague Season 2, StarLadder StarSeries Season 10, World E-sport Championships 2014, HyperX D2L Western Challenge, The Summit စတဲ့ ပွိုငျပှဲတှမှောလညျး EG အတှကျ ပထမဆုမြား ယူပေးနိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
အသငျးရဲ့ carry ကစားသမား Ace ကတော့ Team Secret ကနေ ပွောငျးလာခဲ့သူပါ။ Ace ဟာ ဟိုးအရငျခတျေမြားက ရပေနျးစားကြျောကွားခဲ့တဲ့ Mousesports, MYM, Cloud9 စတဲ့ အသငျးမြားမှာ လညျပတျကစားနခေဲ့ဖူးပါတယျ။ TI ကံမကောငျးလမေ့ရှိခဲ့သူ Ace ဟာ Fata နဲ့ အတူ Team Secret မှာ ကစားခဲ့တဲ့ TI8 မှာတော့ ၅ နဲ့ ၆ ပူးတှဲ နရောထိ တကျရောကျလာနိုငျခဲ့ပါတယျ။ DreamLeague Season 8 နဲ့ DreamLeague Season9တို့လို ပွိုငျပှဲကွီးတှမှောလညျး ပထမနရော ရအောငျ Team Secret အတှငျးကနပေဲ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ပါတယျ။
Ace နဲ့ အတူ Team Secret ကနေ ပွောငျးရှလေ့ာတဲ့ Fata ဟာလညျး သကျတမျးရငျ့ mid lane ကစားသမားကောငျးတဈယောကျဖွဈပွီး Team Liquid နဲ့ အခွားသော အသငျးမြားမှာ လှညျ့လညျကစားခဲ့ပါတယျ။ Fata ပါဝငျခဲ့တဲ့ Team Liquid ဟာ TI6 မှာ ၇ နဲ့ ၈ ပူးတှဲနရော ရရှိခဲ့ပွီး Epicenter 2016 မှာ ပထမ နရောရရှိခဲ့ပါတယျ။ The Shanghai Major 2016 နဲ့ The Manila Major 2016 တို့မှာလညျး ဒုတိယနရောမြားရခဲ့ပါသေးတယျ။
TI grand final အထိ ရောကျဖူးသူ နောကျတဈယောကျအနနေဲ့ Saksa လညျး ပါဝငျပွီး TI6 မှာ ဒုတိယနရောကို Digital Chaos (DC) အသငျးဝငျအနနေဲ့ ရောကျရှိခဲ့တာပါ။ ESL One Genting 2017 မှာလညျး DC ထဲကနပေဲ ပထမ ရခဲ့ပါတယျ။ Coach အတှအေ့ကွုံလညျးရှိတဲ့ Saksa ဟာ 33 ပါဝငျတဲ့ Hellraisers အသငျးကို TI7 ရဲ့ ၁၈ သငျးထဲဝငျတဲ့အထိ နညျးပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။
နောကျဆုံး offlane ကစားသမား 33 ကတော့ OpTic Gaming ကနေ ပွောငျးရှလေ့ာတာဖွဈပွီး TI8 ရဲ့ ၇ နဲ့ ၈ ပူးတှဲနရောကို PPD နဲ့ အတူရရှိခဲ့သူပါ။ ESL One Birmingham 2018 မှာလညျး ဒုတိယရရှိခဲ့ပါတယျ။ အသငျးသားမြား အားလုံးဟာ မြားစှာသော ပွိုငျပှဲမြားမှာ ဆုကွီးမြား မရသညျ့တိုငျအောငျ ကွိုးစားယှဉျပွိုငျ ရုနျးကနျနခေဲ့ကွသူမြားဖွဈပါတယျ။
ထူးထူးခွားခွား သမိုငျးကွောငျးမြားလညျးမရှိပဲ အသဈဖှဲ့စညျးထားတာဖွဈပွီး PPD ဦးဆောငျတဲ့ NiP ဟာ ၂၀၁၈ မှာ GG.Bet Invitational Season 1 မှာ ပထမရရှိခဲ့သလို၂၀၁၉ အတှငျး စှမျးဆောငျခကျြမြားအနနေဲ့ WePlay! Dota2 Tug of War: Radiant, OGA Dota PIT Minor 2019 နဲ့ StarLadder ImbaTV Dota2Minor Season2တို့မှာလညျး ပထမဆုမြား ရရှိခဲ့ပါတယျ။ Dota pro circuit အရ season အပွီးမှာ NiP ဟာ TI9 ကို တိုကျရိုကျဝငျရောကျခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ NiP အသငျးဟာ TI ကို တိုကျရိုကျတကျရောကျခှငျ့ရရှိတာ ပထမဆုံးအကွိမျ ဖွဈပမေယျ့ အသငျးသားမြားကတော့ TI အတှအေ့ကွုံမြားစှာ ရှိကွပါတယျ။
အသငျးဖှဲ့စညျးပုံ နဲ့ ဆကျစပျမှုမြားကလညျး စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလှပါတယျ။ TI အတှအေ့ကွုံရှိသူ အမြားအပွား ပါဝငျတဲ့ NiP ကို TI5 တုနျးက EG လို PPD က ဦးဆောငျပွီး grand final မြားဆီ ချေါဆောငျ အနိုငျယူသှားနိုငျသလို ပွိုငျဆိုငျမှုမြား ပွငျးထနျလှတဲ့ TI ပှဲကွီးထဲမှာ teamwork အနညျးငယျ နုနယျသေးတဲ့ ဒီအသငျးအနနေဲ့ ဘယျလိုရှငျသနျကနျြရဈမယျ ဆိုတာကလညျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးလှပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရလာဒျ မထှကျခငျထိ ဘာမဆို ဖွဈသှားနိုငျတာဟာလညျး Dota ပဲ ဖွဈတာမို့ TI9 ဝငျ NiP အသငျးဟာလညျး စောငျ့ကွညျ့ခံအသငျးတဈသငျး ဖွဈနပေါတော့တယျ။ Dota2သတငျးနှငျ့ အခွား esport သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျလကျြ ရှိပါတယျ။